REDE MISSIONÁRIA: 1 Yohannis: Oromo, Eastern
1 Yohannis 11Qoowliin jireenyaa tanuma duruma jalqabaa irraa kaaftee jirtu; nutiis isii dhageenyee ti jirra, ijuma teenyaaniis agarree ti jirra, harka keenyaaniis qaqqabannee laallee ti jirra; eegaa waa'ee isii tanaa tiin isiniif katabna. 2Jireenyi kun ni mullifame, nutiis waan agarreef ragaa dha baaneefi; jireenya bara baraa kan Rabbi Abbaa wajjiin ture, ammaas kanuma nuttiis mullifame sani isiniif labsina. 3Isiniis nu wajjiin akka asoosama tokkummaa qabaattaniif jecha, waan agarree fi waan dhageenye san isinitti himna; tokkummaan keenya ammoo, Rabbi Abbaa dhaan wajjiin, Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin wajjiiniisi. 4Eegaa akka gammachuun teenya guutamtuuf jecha, kana hundumaa isiniif barreeysina. 5Ergaan nuti, Ilma isaa irraa dhageenyee isinitti himnuus, Rabbi ifa; isa keeysa dukkanti gonkumaa hin jirtu tan jettuu dha. 6Rabbi wajjiin asoosama tokkummaa ni qabna jechaa, dukkana keeysa yoo kan jiraannu taate, ni kijibna; ammaas akkaataa dhugaattiis hin jiraannu. 7Ammoo akka inni ifa keeysa jirutti, ifa keeysa yoo kan jiraannu taane, nutiis asoosama tokkummaa wajjiin qabna; ammaas dhiiyni Ilma isaa Yesuusiis, diluma hundumaa irraa huu nu xaahara. 8Dilii hin qabnu yoo jenne ifuma sobna; dhugaaniis nu keeysa hin jirtu. 9Dilii teenya yoo isatti if himne, inni amanamaa fi qaceelaa waan taheef jecha, dilii teenya nuuf oomfii godha, jallina keenya hundumaa irraahiis nu xaahara. 10Nuti dilii hin qabnu yoo jenne ammoo, kijibaa dha isa goona, qoowliin isaa tiis nu keeysa hin jirtu.
1 Yohannis 21Yaa joollee too! Akka isin dilii hin hojjanneefiin tana isiniif barreeysa; namni tokko illeen yoo dilii godhe ammoo, nuti magantaa Abbaa biraa ni qabna; inni niis Yesuus Kiristoos qaceelaa dha. 2Isaani diliin teenyaas oomfii nuuf godhamti; diluma teenya qofaaf odoo hin tahin, dilii biyya addunyaa hundumaafi. 3Ammaas amrii Rabbii warra godhu yoo taane, tanaan isa beekuun keenya nuufi mirkanaawa. 4Namtichi, “Ani isa niin beeka” jechaa, amrii isaa tiif ammoo kan hin ajajamne kijibaa dha, dhugaaniis isa keeysa hin jirtu. 5Namticha qoowlii isaa eegu keeysaan, jaalalti Rabbii dhugumaan fiinxaan baafamte, tanaaniis nuti isa keeysa tahuu keenya ni mirkaneeyfanna. 6Namtichi, “Rabbiiniin jiraadha” jedhu ammoo, akka Yesuus Kiristoos jiraatetti jiraachuu dha qaba. 7Yaa saahibban koo jaalatamoo! Ani amma, ajaja haaraya isiniif hin barreeysu, ammoo ajaja dullacha isuma jalqaba duraa tuu qabaachaa turtan, ajajni dullachi kuniis qoowlichuma isinuu dhageeysan sani. 8Tahuu illee, dukkanti waan dabraa jirtuu fi, ammaas ifni dhugaa duruun ifaa waan jiruuf jecha, kunoo ajajuma haarayaan isiniif kataba. Kuniis Kiristoos keeysattii fi, ammaas isin keeysattiis kan dhugoomee dha. 9Namtichi, “Ani ifa keeysaan jira” jechaa, ammoo kan obboleeysa isaa jibbu, amma illee inni namuma dukkana keeysa jiraatu. 10Namni obboleeysa isaa jaalatu, ifa keeysa jiraata; isa keeysaas wanti nama gufachiiftu hin jirtu. 11Namni obboleeysa isaa jibbu ammoo, nama dukkana keeysa jiru, dukkana keeysa deddeebi'asi; dukkanti ija isaa waan baysifteef jecha, gara itti deemuus hin beeku. 12Isin yaa joollee jaalatamoo! Maqaa isaa tiin diliin teeysan oomfii waan isiniif godhamteef jechaan isiniif katabaa jira. 13Isin abboottan! Isa kan durumaa kaasee jiru san waan beeytaniifiin isiniif katabaa jira. Isin yaa dargaggoota! Sheeyxaana hamaa san waan moohattaniifiin isiniif kataba. 14Isin joollota! Isin Abbaa waan beeytaniifiin isiniif katabaa jira. Isin yaa abboottan! Isa kan durumaa kaasee jiru san waan beeytaniifiin isiniif katabaa jira. Isin dargaggoota! Isin warra cimoo waan taatanii fi Qoowliin Rabbii tiis isin keeysa waan jiraattuuf, ammaas isa hamaa saniis waan moohattaniifiin isiniif kataba. 15Biyya addunyaa yookiin waan biyya addunyaa tiis hin jaalatinaa! Namtichi biyya addunyaa jaalatu, Rabbi Abbaa jaalachuu hin dandayu. 16Wanni biyya addunyaa keeysa jiru hundinuu, si'oon jasadaa, kajeellaan ijaa tiis, qabeenyaan dhaytaawuuniis, kanneen Abbaa biraa odoo hin tahin, addunyaa irraahi dhufu. 17Biiyti addunyaa tiis waan nama kajeelchisu hundumaan wajjiini dhabamti, namni fedhii Rabbii raawwatu ammoo bara baraaf ni jiraata. 18Yaa joolle! Wayti tun tan xumuraa ti. Kan Kiristoosiin mormu akka dhufu kanaan duraa huu dhageeysanii ti jirtu; ammuma illee kunoo, warri Kiristoosiin morman hoddomaatanii ti jiru. Kanaan barri xumuraa akka dhihaate ni beeyna. 19Isaan nu keeysaa bahan malee, keenyaa miti; odoo keenya tahanii, numaan wajjiini hafu turan. Ammoo isaan wanni nu dhiisanii deemaniif, tokko illeen isaanii nu irraa akka hin tahin, zaahir bahee akka mullifamuufi. 20Isin ammoo isa qulqulluu saniin muudamtanii ti jirtu; hundummaan keeysanuu warra dhugaa beeku. 21Isiniif barreeysuun koo, isin dhugaan maal akka taate waan hin beeyneef odoo hin tahin, dhugaa waan beeytaniifi. Ammaas kijibni dhugaa keeysaa akka hin arkamne ni beeytan. 22Kijibaan eenyu? Kijibaan namuma Yesuus kun, Masiihicha tahuu isaa kaadu; namtichi Abbaa fi Ilma kaaduus, nama Kiristoosiin mormu. 23Nam tokko illeenuu kan Ilma kaadu, Abbaas qabaachuu hin dandayu; namuma Ilmatti amanuu beeysisuu tu Abbaas qabaata. 24Eegaa, wanni jalqaba duraa dhageeysan isin keeysa haa jiraattu; akkana taanaan, isiniis Ilma keeysaa fi ammaas Abbaa keeysaas ni jiraattu. 25Abdiin innummaan ifiif nuuf kannees, jireenya abadi. 26Tanaas waa'ee warra karaa irraa isin maysuu yaalaa jiraniifiin isiniif kataba. 27Muudamni isin Kiristoos biraa fudhattan sun ammoo isin keeysa jiraata; muudamni isaa waanuma hundumaa huu waan isin barsiisuuf jecha, nam tokko illeenuu akka isin barsiisu isin hin barbaachisu. Ruuhaan isaa waan hundumaa isin qaraasisa; wanni inni qaraasisuus dhuga, kijibaas hin qabdu. Waan Ruuhaan isin barsiisuuf ajajamaa, Kiristoos keeysatti sabattanii jiraadhaa! 28Ammaas yaa joollee tiyya! Wayta Kiristoos mullatu, qaanfachuu mannaa, akka ija-jabina qabaannuuf, Kiristoosumatti hidhattanii jiraadhaa! 29Inni qaceelaa tahuu eega beeytanii fuu, ammaas namni waan qaceelaa hojjatu hundinuu, ilmaan Rabbii tahuu isaanii hubachuu ni dandeeysu.
1 Yohannis 31Rabbi Abbaan, jaalala guddoo akkam akka nuuf kanne mee daawwadhaa! Jaalala tanaani nuti joollee Rabbii jedhamnee ti yaamamna; nutiis dhugumani joollee isaa ti. Biiyti addunyaa ammoo Rabbi waan hin beeyneef jecha, nuus hin beeytu. 2Yaa saahibban koo jaalatamoo! Nuti amma joollee Rabbii ti; booddee ammoo maal akka tahuuf deemnu hin beekamne. Haa tahu malee, hogguu inni mullatu, akkuma inni jirutti isa arkinuuf jecha, nutiis akkuma isaa akka taanu ni beeyna. 3Akkaataa kanatti namni abdii tana Kiristoos irratti qabu, akkuma inni qulqulluu tahetti, inni niis if qulqulleeysa. 4Namni dilii dalagu hundinuu seera caphsa; dilii jechuun seera caphsuu jechu. 5Kiristoos, dilii dhabamsiisuuf jecha akka mullate ni beeytu; ammaas inni ifiif dilii hin qabu. 6Eegaa, namni isatti amanee jiraatu hundinuu dilii hin hojjatu; namni dilii hojjatu hundinuu ammoo isa hin arkine, isaas hin beeyne. 7Yaa joollee too, wannummaan takka illee nuu karaa irraa isin hin maysin! Kiristoos qaceelaa akkuma tahetti, namni waan qaceelaa hojjatuus qaceela. 8Sheeyxaanni durumaa jalqabee dilii waan hojjateef jecha, namni dilii hojjatu kan Sheeyxaanaa ti; Ilmi Rabbii ammoo hojii Sheeyxaanaa diiguufi mullate. 9Warri ilmaan Rabbii tahan hundinuu, ruuhaan zaata Rabbii waan isaan keeysa jiruuf jecha, dilii keeysa hin jiraatan; ilmaan Rabbii waan tahaniifiis, dilii dalagaa jiraachuus hin dandayan. 10Joollee Rabbii tii fi joollee Sheeyxaanaa wanni addaan beeynuun, namni waan qaceelaa hin dalayne, ammaas namni obboleeysa hin jaalannees kan Rabbii tii miti. 11Ergaan isin duruma irraa jalqabdanii dhageeysaniis, “Nuti wal jaalachuu qabna” tan jettu turte. 12Akka Qaayyin tahuun nu irra hin jiru; inni kan isa hamaa sanii ti ture, obboleeysa isaa tiis ni ajjeese. Maaliif jecha isa ajjeese? Hojiin mataa isaa hamtuu taatee, hojiin obboleeysa isaa qaceeltuu waan taateef jecha isa ajjeese. 13Yaa obboleeyyan koo, ummanni biyya addunyaa yoo isin jibbe tana hin ajaa'ibinaa! 14Nuti obboleeyyan keenya waan jaalannuuf jecha, du'a keeysaa gara jireenyaatti akka dabrine ni beeyna; namni nama hin jaalanne ammoo du'a keeysatti hafa. 15Obboleeysa isaa namni jibbu hundinuu, nama nama ajjeese; namni nama ajjeese, abdii jireenya bara baraa if keeysaa akka hin qabne isinuu numa beeytan. 16Yesuus Kiristoos, lubbuu isaa nuuf jecha dabarsee kannuu isaa tiini, jaalalti maal akka taate beeynee ti jirra; eegaa, nutiis akkasumatti lubbuu teenya obboleeyyan keenyaaf dabarsinee kannuu dha qabna. 17Warri waa qabu, obboleeysa isaanii deegaa arkanii kan garaa hin laafneef yoo tahan, jaalalti Rabbii akkamitti isaan keeysa jiraatti ree? 18Yaa joollee too! Jechuma afaanii qofaan odoo hin tahin, koottaa mee jaalala teenya dhugaa fi hojiin haa mullifnuu! 19Nuti, warra dhugaa tahuu keenya tanaan hubanna, fuula Rabbii durattiis qalbiin teenya if nu hin dhaammottu. 20Xalaliin teenya yoo tan nutti firdii gootu taate ammoo, Rabbi xalalii teenya irra waan caaluuf, inni waa hundumaa huu ni beeka. 21Yaa saahibban koo! Xalaliin teenya yoo yakka nu irratti firdii godhuu baatte, Rabbi duratti amantaa ni qabna. 22Nuti ajajoota Rabbii fudhannee waan isa gammachiisu waan dalaynuuf jecha, waanuma isa kadhannu takka illee huu isa irraa arkanna. 23Wanni inni nu ajajuus, nuti maqaa Ilma isaa Yesuus Kiristoositti amannee, akkuma Kiristoos nu ajajetti akka wal jaalannuufi. 24Namni ajajoota Rabbii eegu isa keeysa jiraata; Rabbiis namticha san keeysa jiraata; Ruuhaa inni nuuf kanneen, Rabbi nu keeysa jiraachuus ni hubanna.
1 Yohannis 41Yaa saahibban koo! Warra Ruuhaani dubbanna jedhan hundumaa hin amaninaa; dhugumaan Rabbi biraa tahuu isaanii xiinxalaatii hunda adda baafadhaa! Nabiyyoonni kijibaa hedduun, gara biyya addunyaatti bobbahanii ti jiru. 2Ruuhaan, Yesuus Kiristoos jasadaan akka dhufe amanee beeysisu hundinuu Rabbi biraahi; kanaan, Ruuhaa Rabbii tahuu isaa ni hubattu. 3Ruuhaan akkaataa kanatti Yesuus amanee hin beeysifne hundinuu ammoo, Rabbi biraa hii miti; inni kun Ruuhaa Kiristoosiin mormuu dha; ruuhaan kun akka dhufu dhageeysanii ti jirtu. Inni kunoo, ammumaa huu biyya addunyaa keeysa jira. 4Yaa joollee too! Isin warra Rabbii ti, nabiyyoota kijiboo saniis mootanii ti jirtu; ruuhaa biyya addunyaa keeysa jiru san irra, kan isin keeysa jiruu tu irra caalaa bar! 5Isaan warra biyya lafaa ti; kanaaf haala biyya lafaatti dubbatu, biiyti lafaa tiis isaan ni caqasti. 6Nuti warra Rabbii ti, warruma Rabbi beekuu tu nu dhaggeeyfata; warri Rabbii hin beeyne ammoo nu hin dhaggeeyfatan. Kanaani Ruuhaan dhugaa, ruuhaa kijibaa irraa addaan baafannee ti hubanna. 7Yaa saahibban jaalatamoo! Jaalalti Rabbi biraa waan taateef jecha, koottaa wal haa jaalannuu! Namoonni nama jaalatan hundinuu ilmaan Rabbii ti, Rabbiis ni beeku. 8Rabbi jaalala waan taheef jecha, namni nama hin jaalanne, Rabbi hin beeku. 9Rabbi, akka nuti isaan jireenya arkannuuf jecha, tokkicha Ilma isaa gara biyya addunyatti erguu dhaan, jaalala isaa nutti mullise. 10Jaalala jechuun, nuti Rabbi jaalanne jechuu miti, ammoo Rabbi ifumaa nu jaalatee, Ilma isaa gumaa dilii teenyaa godhee erge jechu. 11Yaa saahibban koo! Rabbi kan akkanatti nu jaalate eega tahe, eegasuu nutiis wal jaalachuu tu nu irra jira. 12Nam tokko illeenuu Rabbi takkaa hin agarre; nuti ammoo yoo wal jaalanne, Rabbi nu keeysa jiraata, jaalalti inni nu jaalatuus nu keeysatti fiinxaan baati. 13Inni Ruuhaa isaa waan nuuf kanneef jecha, nuti isa keeysa, inni niis nu keeysa akka jiraatu ni hubanna. 14Abbaan, Ilma isaa naja-baasoo biyya addunyaa godhee akka erge, nuti arkinee ti jirra, ragaa dha baanaasi. 15Namtichi, Yesuus Ilma Rabbii tahuu isaa amanee beeysise, Rabbi isa keeysa, inni niis Rabbi keeysa ni jiraata. 16Nutiis jaalala Rabbi nuuf qabu hubannee amannee ti jirra. Rabbi jaalala; namni nama jaalachaa jiraatu Rabbi keeysa jiraata, Rabbiis nama san keeysa ni jiraata. 17Nuti dhugumaani nama jaalannee, akkaatuma Kiristoos biyya addunyaa tana irra jiraatetti yoo jiraanne, guyyaa firdii tiif if hin dhaammonnu. 18Jaalala keeysa sodaan hin jirtu; jaalalti dhugaa, sodaa baaftee ti darbiti; sodaan adabaan walitti hidha, namticha sodaatu jaalalti isaa bakka hin geenye. 19Rabbi duraan dursee waan nu jaalateef jecha, nutiis ni jaalanna! 20Namni, “Rabbi niin jaaladha” jechaa, obboleeysa isaa ammoo yoo jibbe, inni kijibaa dha; obboleeysa isaa kan ijaan arkuu huu namni hin jaalanne, Rabbii inni ijattuu hin arkin jaalachuu hin dandayu. 21Eegaa, amriin isa biraa arkanne tana, namni Rabbi jaalatu, obboleeysa isaa tiis ammaas haa jaalatu jedha.
1 Yohannis 51Yesuus kun, Masiihii tahuu isaa namni amanan hundinuu, ilmaan Rabbii ti; namni Abbaa dhale jaalatu Ilma inni dhalees ni jaalata. 2Rabbi jaalachuu fi ajaja isaa godhuu keenyaani, nuti joollee Rabbii jaalachuu keenya beeyna. 3Rabbi jaalachuu jechuuniis, ajajoota isaa eeguu dha; ajajoonni isaa ammoo ba'aa ulfaattuu miti. 4Warri ilmaan Rabbii tahan hundinuu, biyya addunyaa ni moohu, humniti biyya addunyaa tiin moonuun, amantii teenya. 5Eenyuu tu biyya addunyaa moohuu dandaya? Yesuus Ilma Rabbii tahuu isaa nama amanu qofaatu biyya addunyaa moohuu dandaya. 6Inni bishaanii fi ammaas dhiigaan dhufe kun, Yesuus Kiristoosi. Inni bishaan qofaan odoo hin tahin, bishaanii fi dhiigaani dhufe. Ruuhaa dha kan kanaaf ragaa bahu, Ruuhaaniis dhugaa dha. 7Raga-baatuu sadihii tu jira. 8Isaaniis ruuhaa, bishaanii fi dhiiga; ragoonni kanneen sadeenuu, waanuma tokkicha ragaa bahu. 9Nuti ragaa namaatuu warra fudhatu yoo taane, bar ammoo ragaa Rabbii tu irra caalaa. Ragaan Rabbii tiis kanuma inni Ilma isaa tiif ragaa bahe. 10Namni Ilma Rabbitti amanu hundinuu, ragaa kana if keeysaa qaba; namni Rabbitti hin amanne ammoo, waan Rabbi Ilma isaa tiif ragaa bahe san waan hin amaniniif jecha, Rabbumaa huu kijibaa godhuu isaa ti. 11Ragaan inni bahees, Rabbi jireenya bara baraa nuuf kannee ti jira; jireenyi bara baraa kuniis, Ilma isaa keeysatti arkama kan jedhu. 12Namni Ilma Rabbii qabu, jireenya kana ni qaba; namni Ilma Rabbii hin qabne ammoo, jireenya kana hin qabu. 13Isin warri maqaa Ilma Rabbitti amantan, jireenya bara baraa qabaachuu 14Akka fedhii isaatti yoo Rabbi kadhanne, inni waan kadhanne san akka nuuf kannu, amantaan teenya isa irratti mirkanooyti. 15Kadhata keenya akka inni nuuf dhagayu yoo beeyne, waan isa kadhanne akka isa biraa arkannuus ni beeyna. 16Namni, obboleeysa isaa dilii du'a bara baraatti isa hin geeysine odoo hojjatuu arkuu, haa maganfatuufii; Rabbiis jireenya isaaf ni kanna. Kuniis warra dilii du'a bara baraatti isaan hin geeysine hojjatan qofaafi taha; eegaa, diliin du'a bara baraatti nama geeysitu ni jirti; warra akkasii tiif maganfadhaa jechuu kiyyaa miti. 17Badii dalaguun hundinuu dilii dha; ammoo diliin du'a bara baraatti nama hin geeysine ni jirti. 18Namoonni ilmaan Rabbii tahan dilii dalagaa akka hin jiraanne ni beeyna; Ilmi Rabbii isaan waan eeguuf jecha, Sheeyxaanni niis isaan tuquu hin dandayu. 19Nuti ilmaan Rabbii tahuu keenyaa fi, guutummaan biyya addunyaa ammoo humna Sheeyxaanaa jala jiraachuu isii tiis ni beeyna. 20Ilmi Rabbii, Rabbiin dhugaa eenyu akka tahe beekuuf, hubannaa nuuf kannuuf jecha dhufuu isaa ni beeyna. Nuti isa dhugaa tahe san, Ilma isaa Yesuus Kiristoos keeysa warra jirru; inni Rabbii dhugaa ti, jireenya bara baraa tiisi. 21Yaa joollee too, waaqayyolii tolfaman irraa if eeggadhaa!